ဂပြနျက ရထားဘူတာတှမှော ဘာလို့မီးအပွာရောငျတှေ အမြားဆုံးသုံးထားရတာလဲ ? ? ? – SoShwe
Home/Other/ဂပြနျက ရထားဘူတာတှမှော ဘာလို့မီးအပွာရောငျတှေ အမြားဆုံးသုံးထားရတာလဲ ? ? ?
ဂပြနျက ရထားဘူတာတှမှော ဘာလို့မီးအပွာရောငျတှေ အမြားဆုံးသုံးထားရတာလဲ ? ? ?
ဂပြနျလူမြိုးတှဟော သူတို့နညျးသူတို့ဟနျနဲ့ အောငျမွငျထှနျးပေါကျနပေမေယျ့လညျး အလုပျခှငျ၊ ပတျဝနျးကငျြနဲ့ မိသားစုအသိုငျးအဝိုငျးကနရေလာတဲ့ စိတျဖိစီးမှုတှကေို အဆုံးသတျဖို့အတှကျ ရထားသံလမျးမှာခုနျခပြွီး မိမိကိုယျကို အဆုံးစီရငျတာတှကေို ပွုလုပျလာကွပါတယျ။ အခုဆိုရငျ ဂပြနျနိုငျငံဟာ ကိုယျ့ကိုယျကိုအဆုံးစီရငျတဲ့ လူဦးရအေမြားဆုံး နိုငျငံ၂၀ ထဲမှာပါဝငျနပေါတယျ။ ၂၀၀၃ ခုနှဈက သတျသတေဲ့လူဦးရထေကျ ၂၀၁၇ ခုနှဈမှာ သတျသတေဲ့လူဦးရကေ ပိုနညျးလာတယျဆိုပမေယျ့ လူငယျတှသေတျသတေဲ့နှုနျးက မွငျ့တကျနဆေဲ ဖွဈပါတယျ။
ဂပြနျရထားကုမ်ပဏီတှကေ ဒီလိုသတျသခွေငျးတှကေို လြှော့ခနြိုငျဖို့အတှကျ ရထားဘူတာတှမှော တတျနိုငျသလောကျ အပွာရောငျတှကေို အသုံးပွုလာကွပါတယျ။ ၂၀၀၈ ခုနှဈမှ စတငျကာ မီးအပွာရောငျတှကေို တိုကြိုက ရထားဘူတာရုံ ၂၈ ရုံမှာ စတငျအသုံးပွုလာကွပါတယျ။ စိတျဖိစီးမှုဝဒေနာကို ခံစားနရေတဲ့ လူတျောတျောမြားမြားက အပွာရောငျမီးရောငျအောကျမှာ အနားယူမယျဆိုရငျ စိတျအေးခမျြးမှု ပိုရတတျကွကွောငျးကို ၁၀ နှဈကွာ သုတသေန ပွုလုပျပွီးတဲ့အခါမှာတော့ ဂပြနျက ရထားဘူတာရုံ ၇၁ ရုံမှာ အပွာရောငျမီးတိုငျတှကေို စင်ျကွနျလမျးတဈလြှောကျ စိုကျထူလိုကျခွငျးဟာ သကွေောငျးကွံစညျတာတှကေို ၈၄% အထိ လြှော့ခနြိုငျခဲ့ပါတယျ။ ဒီနညျးစနဈကို ဆှဇျဇာလနျ၊ ဘယျလျဂြီယနျနဲ့ ဗွိတိနျနိုငျငံတို့မှာလညျး အသုံးပွုလာကွပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ နောကျထပျပွသနာတဈခုက နဖေ့ကျအခြိနျတှမှော သဘာဝအလငျးရောငျရှိနတေဲ့အတှကျ အပွာရောငျမီးတိုငျတှဟော အရောငျမှိနျနတောတို့ မီးပိတျထားတာတို့ ဖွဈတတျပါသေးတယျ။ အီခြီကာဝါက ကိုယျ့ကိုယျကိုယျအဆုံးစီရငျဖို့ စဉျးစားထားတဲ့လူတဈယောကျဟာ သူစိတျကိုဖွောငျးဖွနိုငျမယျ့ အပွာရောငျမီးတိုငျတှမေရှိတဲ့ နဖေ့ကျအခြိနျမှာလညျး သတျသသှေားနိုငျပါတယျလို့ ဆိုထားပါတယျ။ ဒီလိုနဲ့ အပွာရောငျမီးတိုငျတှကေ လူတှရေဲ့စိတျအခွအေနအေပျေါ ဘယျလောကျထိ သကျရောကျမှုရှိလဲဆိုတာကို လလေ့ာနခြေိနျမှာပဲ လူတှကေ ဒီအပွာရောငျကိုမွငျပါမြားလာတော့ ဘာအကြိုးသကျရောကျမှုမှ ထပျမဖွဈလာတော့ဘူး။
ဒီဇိုငျးပညာရှငျ Stephen Westland က အရောငျတှဟော လူ့စိတျကို တညျငွိမျစပေမေယျ့ လူတှရေဲ့စိတျလိုကျမာနျပါ ပွုမူခွငျးကိုတော့ မထိနျးခြုပျပေးနိုငျဘူးလို့ ပွောလာပါတယျ။ ဒါကွောငျ့မို့ အပွာရောငျမီးတိုငျတှအေစား မှနျတံခါးတှကေို တပျဆငျလိုကျတာက ပိုပွီးတော့အကုနျအကမြားနိုငျပမေယျ့ ပိုပွီးစိတျခလြုံခွုံမှုရှိမယျလို့ ကောကျခကျြခလြိုကျကွပါတယျ။ Westland ရဲ့ပွောကွားခကျြအရ အပွာရောငျ ဒါမှမဟုတျ အနီရောငျက လူတှကေို စိတျလိုကျမာနျပါ လုပျစနေိုငျတယျလို့ သခြောမပွောနိုငျပမေယျ့ သကွေောငျးကွံစညျတာကို တားဆီးဖို့အတှကျလညျး အရောငျဟာ အကြိုးသကျရောကျမှုရှိမနပေါဘူး။
မီးအပွာရောငျက လူတှရေဲ့သတျသခေငျြစိတျကို လြော့နညျးသှားစပေမေယျ့လညျး ဒါဟာတိကသြခြောတဲ့အဖွေ မဟုတျသေးပါဘူး။ လလေ့ာခကျြမြိုးစုံ ပွုလုပျပွီးတဲ့အခါမှာတော့ ရထားဘူတာက စင်ျကွနျလမျးတှမှော မှနျတံခါးတှေ တပျဆငျလိုကျတာဟာ တခွားသောနညျးတှထေကျ ပိုပွီးအကြိုးသကျရောကျမှုရှိလာပွီး ရထားသံလမျးပျေါကိုခုနျခတြဲ့ အဆုံးစီရငျခွငျးမြိုးတှကေိုလညျး ထိနျးသိမျးလြှော့ခနြိုငျခဲ့ပါတယျ။
ဂျပန်က ရထားဘူတာတွေမှာ ဘာလို့မီးအပြာရောင်တွေ အများဆုံးသုံးထားရတာလဲ ? ? ?
ဂျပန်လူမျိုးတွေဟာ သူတို့နည်းသူတို့ဟန်နဲ့ အောင်မြင်ထွန်းပေါက်နေပေမယ့်လည်း အလုပ်ခွင်၊ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ မိသားစုအသိုင်းအဝိုင်းကနေရလာတဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို အဆုံးသတ်ဖို့အတွက် ရထားသံလမ်းမှာခုန်ချပြီး မိမိကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်တာတွေကို ပြုလုပ်လာကြပါတယ်။ အခုဆိုရင် ဂျပန်နိုင်ငံဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်တဲ့ လူဦးရေအများဆုံး နိုင်ငံ၂၀ ထဲမှာပါဝင်နေပါတယ်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်က သတ်သေတဲ့လူဦးရေထက် ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ သတ်သေတဲ့လူဦးရေက ပိုနည်းလာတယ်ဆိုပေမယ့် လူငယ်တွေသတ်သေတဲ့နှုန်းက မြင့်တက်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဂျပန်ရထားကုမ္ပဏီတွေက ဒီလိုသတ်သေခြင်းတွေကို လျှော့ချနိုင်ဖို့အတွက် ရထားဘူတာတွေမှာ တတ်နိုင်သလောက် အပြာရောင်တွေကို အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှ စတင်ကာ မီးအပြာရောင်တွေကို တိုကျိုက ရထားဘူတာရုံ ၂၈ ရုံမှာ စတင်အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုဝေဒနာကို ခံစားနေရတဲ့ လူတော်တော်များများက အပြာရောင်မီးရောင်အောက်မှာ အနားယူမယ်ဆိုရင် စိတ်အေးချမ်းမှု ပိုရတတ်ကြကြောင်းကို ၁၀ နှစ်ကြာ သုတေသန ပြုလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ ဂျပန်က ရထားဘူတာရုံ ၇၁ ရုံမှာ အပြာရောင်မီးတိုင်တွေကို စင်္ကြန်လမ်းတစ်လျှောက် စိုက်ထူလိုက်ခြင်းဟာ သေကြောင်းကြံစည်တာတွေကို ၈၄% အထိ လျှော့ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီနည်းစနစ်ကို ဆွဇ်ဇာလန်၊ ဘယ်လ်ဂျီယန်နဲ့ ဗြိတိန်နိုင်ငံတို့မှာလည်း အသုံးပြုလာကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် နောက်ထပ်ပြသနာတစ်ခုက နေ့ဖက်အချိန်တွေမှာ သဘာဝအလင်းရောင်ရှိနေတဲ့အတွက် အပြာရောင်မီးတိုင်တွေဟာ အရောင်မှိန်နေတာတို့ မီးပိတ်ထားတာတို့ ဖြစ်တတ်ပါသေးတယ်။ အီချီကာဝါက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အဆုံးစီရင်ဖို့ စဉ်းစားထားတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာ သူစိတ်ကိုဖြောင်းဖြနိုင်မယ့် အပြာရောင်မီးတိုင်တွေမရှိတဲ့ နေ့ဖက်အချိန်မှာလည်း သတ်သေသွားနိုင်ပါတယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ အပြာရောင်မီးတိုင်တွေက လူတွေရဲ့စိတ်အခြေအနေအပေါ် ဘယ်လောက်ထိ သက်ရောက်မှုရှိလဲဆိုတာကို လေ့လာနေချိန်မှာပဲ လူတွေက ဒီအပြာရောင်ကိုမြင်ပါများလာတော့ ဘာအကျိုးသက်ရောက်မှုမှ ထပ်မဖြစ်လာတော့ဘူး။
ဒီဇိုင်းပညာရှင် Stephen Westland က အရောင်တွေဟာ လူ့စိတ်ကို တည်ငြိမ်စေပေမယ့် လူတွေရဲ့စိတ်လိုက်မာန်ပါ ပြုမူခြင်းကိုတော့ မထိန်းချုပ်ပေးနိုင်ဘူးလို့ ပြောလာပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အပြာရောင်မီးတိုင်တွေအစား မှန်တံခါးတွေကို တပ်ဆင်လိုက်တာက ပိုပြီးတော့အကုန်အကျများနိုင်ပေမယ့် ပိုပြီးစိတ်ချလုံခြုံမှုရှိမယ်လို့ ကောက်ချက်ချလိုက်ကြပါတယ်။ Westland ရဲ့ပြောကြားချက်အရ အပြာရောင် ဒါမှမဟုတ် အနီရောင်က လူတွေကို စိတ်လိုက်မာန်ပါ လုပ်စေနိုင်တယ်လို့ သေချာမပြောနိုင်ပေမယ့် သေကြောင်းကြံစည်တာကို တားဆီးဖို့အတွက်လည်း အရောင်ဟာ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမနေပါဘူး။
မီးအပြာရောင်က လူတွေရဲ့သတ်သေချင်စိတ်ကို လျော့နည်းသွားစေပေမယ့်လည်း ဒါဟာတိကျသေချာတဲ့အဖြေ မဟုတ်သေးပါဘူး။ လေ့လာချက်မျိုးစုံ ပြုလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ ရထားဘူတာက စင်္ကြန်လမ်းတွေမှာ မှန်တံခါးတွေ တပ်ဆင်လိုက်တာဟာ တခြားသောနည်းတွေထက် ပိုပြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလာပြီး ရထားသံလမ်းပေါ်ကိုခုန်ချတဲ့ အဆုံးစီရင်ခြင်းမျိုးတွေကိုလည်း ထိန်းသိမ်းလျှော့ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Previous ခွငျတှနေဲ့ပတျသကျပွီး သငျမသိသေးတဲ့အခကျြ ၁၇ ခကျြ။
Next အလှတျပွောငျးရှကွေ့ေးဖွငျ့ ချေါယူခဲ့သော ဆိုးရှာသညျ့ အပွောငျးအရှမြေ့ား။